Ampidino Unlocker ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.16 MB)
Mora dia mora ny mamafa ny rakitra sy lahatahiry izay tsy azo hamafana aminny Unlocker! Rehefa manandrana mamafa ny fisie na ny fampirimana aminny solo-sainanao Windows ianao dia Tsy azo tanterahina ity hetsika ity satria misokatra aminny fisie hafa ny fisie na ny fisie. Akatony ny folder ary andramo indray sns. Fandaharana azonao ampiasaina hanamboarana ny lesoka azonao. Maimaimpoana ny fampidinana unlocker ary ahoana no fampiasana azy? Izy io dia programa fisainana rakitra sy famafana izay tsotra ampiasaina. Aminny fipihana ny bokotra Download Unlocker etsy ambony dia azonao atao ny misintona ny kinova portable (tsy misy fametrahana, tsy misy fametrahana) ao aminny solosainao ary manomboka mampiasa azy eo noho eo ianao.
Sintomy ny Unlocker
Unlocker dia programa fanesorana rakitra izay manome ny mpampiasa vahaolana tena azo ampiharina aminny famafana ireo rakitra tsy voafafa sy ny famafana ireo lahatahiry tsy voafafa. Tsy afaka mamafa ny rakitra: nolavina ny fidirana. Olana aminny famonoana rakitra sy lahatahiry ao aminny Windows, toy ny Ny loharano na ny rakitra kendrena dia mety ampiasaina., Ny rakitra dia ampiasainny programa na mpampiasa hafa., Hamarino tsara fa tsy feno na voaaro aminny soratra ny kapila, ary Tsy ampiasaina io rakitra io. mamaha.
Unlocker, izay rindrambaiko azonao sintonina sy ampiasaina aminny solo-sainao maimaimpoana, dia mamaha ireo rakitra sy lahatahiry izay tsy azontsika esorina aminny solo-saintsika noho ny antony samihafa, ahafahantsika mamafa ireo rakitra sy lahatahiry ireo. Aminny tranga toy izany, ny rafitra miasa Windows dia mety hanome antsika hafatra diso hafa. Indraindray isika dia mety hampandrenesina fa tsy manana fahefana hamafa ilay rakitra na lahatahiry tiana hamafana isika. Mety misy hafatra diso hafa miseho, toy ny fisie na ny folder hamafaina dia ampiasainny programa na mpampiasa hafa, ny rakitra dia mbola ampiasaina, voaaro ny disk. Aminireo tranga rehetra ireo dia azonao atao ny mampiasa Unlocker ary manaisotra ilay rakitra na lahatahiry.
Ahoana ny fampiasana Unlocker?
Unlocker dia afaka mampifangaro tena ao anaty menio mombamomba ny tsindrio havanana. Rehefa tsindrio ny fisie sy ny folder misy ny bokotra totozy ankavanana dia azonao jerena ny hitsin-dàlana Unlocker ao aminny menio misokatra ary azonao atao ny manomboka ny fizotra mamoha aminny fipihana io hitsin-dàlana io. Unlocker dia afaka mitanisa ireo loharano mifehy sy manidy ny fidirana aminny rakitra na lahatahiry. Raha tianao dia azonao atao ny manala ny fifehezana ireo loharano rehetra ao aminilay rakitra na folder aminny tsindry tokana. Aorianity dingana ity dia azo atao ny mamafa ireo rakitra sy lahatahiry izay tsy azonao nofafana taloha.
Tsindrio havanana aminny folder na fisie ary safidio Unlocker.
Raha mihidy ny fampirimana na ny fisie dia hiseho eo am-baravarankely ny fitanisana ireo boaty.
Tsindrio fotsiny ny Unlock All!
Unlocker dia rindrambaiko azonao ampiasaina mora foana satria miaraka aminny fanohananny Tiorka.
Fanamarihana: Mandritra ny dingana fametrahana ny programa dia atolotra ny mpampiasa ny tolotra fametrahana. Noho izany, mamporisika anao izahay hanaraka tsara ireo dingana fametrahana.
Haben'ny rakitra: 0.16 MB